အခမဲ့ YouTube မှာယူသူနှင့်အခမဲ့ YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိလား။
သင်ပိုမို subscriber များအားပါသလားနှင့်သင့် YouTube ဗီဒီယိုအပေါ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု likes? login ရန်သင့်ယူကျု့ချန်နယ် URL ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်စတင်ရန်!
ယခုအခမဲ့ YouTube မှာယူသူကိုရယူပါ။ or YouTube ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူများကိုဝယ်
အခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအားလက်ခံရရှိ, ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရီမီယံ subscriber များအားကြိုးစား, အမြင်များနှင့်ပင်မြန်ဆန်ကြီးထွားမှုအတွက် likes!
စာရင်းသွင်း & ဝင်မည်
ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်းနှင့်ဝင်ခြင်းစက္ကန့် ၃၀ ကြာသည်။
သင့် Channel ကြီးထွားမှုကိုကြည့်ပါ
အခမဲ့ & Paid အစီအစဉ်များ
စာရင်းသွင်းသူများသည် ထိန်းထားမှု နည်းပါးသည်။
စာရင်းသွင်းသူများသည် မြင့်မားသော ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်သည်။
အဆိုပါအမြန် Track တွင်
မင်းရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် YouTube ကိုအခမဲ့စာရင်းပေးသူပိုရအောင်နည်းလမ်း ၁၅ ချက်
၂၀၂၁ မှာတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ YouTube အသုံးပြုသူ ၁.၈၆ ဘီလီယံခန့်ရှိတယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းသောလူများသည်အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များကိုလိုက်နာရန် YouTube ကိုသုံးသည်။
ဤစာရင်းဇယားများအရသင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင် YouTube ၏စွမ်းအားကိုအသုံးမချလျှင်သင်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာသည်အနာဂတ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏လက်လှမ်းမီမှုကိုချဲ့ထွင်ရန်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီသည်။ သို့သော်ဤကဲ့သို့လည်ချောင်းယှဉ်ပြိုင်မှုဖြင့်လွယ်ကူစွာရနိုင်သော video content ကျယ်ပြောသောသမုဒ္ဒရာမှသင်မည်သို့ထူးခြားသနည်း။
ဤဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လုပ်ငန်းကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ရန်အခမဲ့ YouTube subscriber များကိုစုဆောင်းရန်အသုံးဝင်သောအချက် ၁၅ ချက်ကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်ငုပ်လိုက်ရအောင်။
ဤအရာသည်ထင်ရသော်လည်း၊ သင်၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းပေးသွင်းရန်သင်၏ပရိသတ်အားအားပေးခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံအခမဲ့ YouTube subscribers များရရှိရန်လိုအပ်သည်။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွေ၊ ဆင်းသက်စာမျက်နှာတွေဒါမှမဟုတ်အခြားဆိုရှယ်မီဒီယာပို့စ်တွေရဲ့အဆုံးမှာ CTAs (Action to Call) ကိုထည့်သွင်းပုံဟာအတော်လေးဆင်တူပါတယ်။
စာရင်းပေးသွင်းရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုစတင်ခြင်းသည်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်လာသည်ဟုသင်ထင်လျှင်ဗီဒီယို၏အဆုံးတွင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့ချန်နယ်ကိုဘာကြောင့်စာရင်းသွင်းရကျိုးနပ်တယ်၊ မင်းကြည့်ရှုသူတွေအကျိုးအတွက်စားပွဲပေါ်ကိုတင်လာတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြသဖို့မမေ့ပါနဲ့။ ရိုးသားပါ၊ သူတို့ရဲ့စေ့စပ်ပွဲကမင်းအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုဖန်တီးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကူညီပေးသလဲဆိုတာကိုပြပါ။
ဤအရာသည်နားလည်လွယ်သောပုံမပေါ်သော်လည်းဖော်ပြရန်လိုသေးသည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော YouTube ဖန်တီးသူများစွာသည်ပျမ်းမျှအကြောင်းအရာများတင်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့သည်လာမည့်ကြီးမားသော YouTube အာရုံခံစားမှုဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုခံစားရသည်။ News flash: မင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ အင်တာနက်သည်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားအားလုံးနှင့်အကြောင်းအရာများပြည့်နှက်နေသည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသဖြင့်၎င်းတို့သည်သင်၏ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုရန်၎င်းအားစာရင်းသွင်းရန်သင်၏ပရိသတ်အားထူးခြားသောအရာတစ်ခုကိုပေးနိုင်သင့်သည်။ မဟုတ်ရင်သူတို့ကနောက်အကောင်းဆုံးချန်နယ်ကိုရွှေ့ဖို့ရွေးစရာတစ်ခုရှိတယ်။
သင်၏နောက်ဗီဒီယိုကိုဖန်တီးရန်မစဉ်းစားမီကျယ်ပြန့်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုပြုလုပ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ မင်းရဲ့လုပ်ငန်းမှာတခြားသူတွေလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးလုပ်မယ့်အစား box-out-the-box ကိုစဉ်းစားပြီးမင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုရယူလိုက်ပါ။ မင်းရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်သလိုသူတို့ကိုပယ်ပစ်နိုင်သလိုမင်းရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ပထမ ၁၀ စက္ကန့်ကိုအထူးအာရုံစိုက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးပါ။ ဘယ် channel ကိုပိုနှစ်သက်လဲ? AWOL ကိုသွားရန်တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်သာပို့စ်တင်သောသူတစ်ယောက်လား။ ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်အမြဲမပြတ်တင်တဲ့အခြားချန်နယ်တစ်ခုလား။ အဖြေကိုငါတို့အားလုံးသိတယ် - သူတို့ရဲ့ချန်နယ်ကိုသူတို့ရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်အကြောင်းအရာအသစ်တွေနဲ့အမြဲလိုလိုအပ်ဒိတ်လုပ်သူကိုရွေးတယ်။ ဖန်တီးသူတစ် ဦး အနေနှင့်၎င်းတို့အားဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ကြည့်ရှုသူအသစ်များအားအချိန်မီတင်ရန်မျှော်လင့်သည်။ အခမဲ့ YouTube စာရင်းပေးသူပိုများလေအခမဲ့ YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုပိုရလေဖြစ်သည်။ Win-win!
သင်၏အကြောင်းအရာတင်ရန်အချိန်ဇယားရှိခြင်းသည်သင့်အားစုစည်းစေပြီးရလဒ်များရရှိစေသည်။ တိုက်ရိုက်လွှင့်တင်ရန်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ထိုင်နေရန်မလိုအပ်ပါ။ လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများကိုသင်နောက်ပိုင်းတွင်လွှင့်တင်နိုင်သောသင်၏ဗီဒီယိုများကိုအချိန်ဇယားဆွဲရန်ခွင့်ပြုသည်။
၄။ သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကိုအခြားပလက်ဖောင်းများတစ်လျှောက်တွင်မြှင့်တင်ပါ
သင့်မှာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ရှိပြီးသားဆိုလျှင်အခမဲ့ YouTube subscriber များရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တသမတ်တည်းအသွားအလာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်၏ YouTube ချန်နယ်ကိုကြော်ငြာပါ။ သင်မှန်ကန်သော plugins များကိုသုံးပါကသင်၏ပရိသတ်သည်ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ရုံဖြင့်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရန်သင်၏ YouTube စာမျက်နှာသို့ညွှန်ပြနိုင်သည်။ သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များတွင်သင်၏ YouTube လင့်ခ်များထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
နောက်ထပ်ကြီးစွာသောလှည့်ကွက်သည် Twitter၊ Facebook၊ Instagram နှင့် LinkedIn ကဲ့သို့သောအခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သင်၏ YouTube channel ကိုအပြန်အလှန်မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ မင်းမှာဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုပေါ်လာတိုင်းမင်းမျှော်လင့်ချက်ကိုတည်ဆောက်ဖို့မင်းရဲ့ Instagram ဇာတ်လမ်းမှာနမူနာ (သို့) အပိုင်းတိုလေးတွေကိုဝေမျှနိုင်ပါတယ်။ သင်သည်ဤပလက်ဖောင်းများတွင်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောနောက်လိုက်အရေအတွက်ကိုစုဆောင်းပြီး၎င်းတို့သည်သင်လုပ်သောအရာကိုနှစ်သက်လျှင်၎င်းတို့သည်သင်၏ရေရှည်စာရင်းပေးသွင်းသူများမဖြစ်လာမီအချိန်သာဖြစ်လိမ့်မည်။
၅။ သင်၏ဗွီဒီယိုများတွင် Watermark တစ်ခုထည့်ပါ
YouTube ရှိအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများသည်၎င်းတို့ဖန်တီးသောဗီဒီယိုများအားလုံးတွင်ရေစာသေးသေးလေးကိုထည့်နိုင်သည်။ အတော်လေးအစပြုသူတွေကအကြောင်းအရာဖန်တီးသူတွေကပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ watermark option ရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိတောင်မထားမိဘူး။ ၎င်းသည်သင်၏ဗွီဒီယိုများ၏ညာဘက်အောက်ထောင့်၌ပျံဝဲနေသောသင်္ကေတလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏အမှတ်တံဆိပ်ရေစာသို့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေ၊ YouTube ၏ပုံမှန်စာရင်းသွင်းခလုတ်နှင့်တူသောရေစာကိုသုံးနိုင်သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်ရေစာသည်သတိမပြုမိဘဲဖြစ်စေ၊ ကြည့်ရှုသူများကိုပါတစ်စုံတစ်ရာလုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုမပေးနိုင်ပါ။ YouTube သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အနီရောင်စာရင်းသွင်းခလုတ်ကိုလိုက်နာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်ကြည့်ရှုသူများသတိပြုမိစေရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး၎င်းတို့ကိုကလစ်ရန်ပိုအလားအလာရှိသည်။ သို့သော်သင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လိုလျှင်၊ မီနူးတွင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုနှိပ်ပါ၊ ထို့နောက်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အခမဲ့ YouTube subscribers များရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ကြည့်ရှုသူများကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပြီးသင်လုပ်သောအကြောင်းအရာကိုစွဲလမ်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့မြင်တာကိုသဘောကျတာနဲ့မင်းရဲ့အလုပ်ကစကားပြောတာအားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ YouTube ကိုဖန်တီးသူအများစုကသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့စမတ်ကျတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုအတွက်မျှော်လင့်ချက်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တေးဂီတဗီဒီယိုအသစ်၊ ထုတ်ကုန်သစ်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ သင်၏ထုတ်ကုန်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်၊ ၀ န်ဆောင်မှုသစ်တစ်ခု (သို့) နာမည်ကျော်ကြယ်တစ်ပွင့်နှင့်အံ့အားသင့်စရာပူးပေါင်းခြင်းပင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းနောက်ဗီဒီယိုကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအရိပ်အမြွက်ပြောခြင်းအားဖြင့်မင်းရဲ့ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ မင်းအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရင်မင်းရဲ့သစ္စာရှိကြည့်ရှုသူတွေဟာနောက်နှစ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး YouTube အခမဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာနိုင်ပါတယ်။
၇။ သင်၏ကြည့်ရှုသူများကိုစွဲလမ်းစေရန် Playlists များဖန်တီးပါ
playlist တစ်ခုနဲ့ပိုကောင်းအောင်စီစဉ်လို့ရတဲ့ဗွီဒီယိုအစုံရှိပါသလား။ သင်ကစာရင်းကိုင်သင်ခန်းစာများကိုကမ်းလှမ်းပြီးဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းမှာ webinars အစုံရှိလား။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပြသစာရင်းများကမင်းရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကိုသင့်အကြောင်းအရာထဲမှာအဆက်ရှိနေကြောင်းပြသခြင်းဖြင့်မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးခြေကိုရှေ့ဆက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပြသစာရင်းတစ်ခုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုရေရှည်ခရီးတစ်လျှောက်လမ်းညွှန်ပေးပြီးမူးမူးတယ်ကြည့်ရှုလိုသူကိုဆွဲဆောင်ပါ။
ပြသစာရင်းများ၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်သင်၏ချန်နယ်ကြည့်ရှုချိန်ကိုတိုးစေသည်။ ဗီဒီယိုများသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအစီအစဉ်အတိုင်း 'AutoPlay' mode တွင်ဆက်လက်ကစားသည်။ ၎င်းသည်အနှစ်တစ်ထောင်မျိုးဆက်သည် Netflix စီးရီးတစ်ခုသို့စွဲလမ်းပုံနှင့်ဆင်တူသည်။ YouTube playlist တစ်ခုဖြင့်မင်းရဲ့ channel ကို free YouTube likes များစုဆောင်းရန်အကြောင်းပြချက်များစွာပေးပြီးမင်းရဲ့ channel ကိုတူညီတဲ့ binge-ဆန္ဒနဲ့ရလဒ်ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်။
အဆုံးစခရင်များနှင့်ကတ်များသည်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုထိရောက်စေသောအစွမ်းထက်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ နာမည်ဖော်ပြသည့်အတိုင်းအဆုံးစခရင်သည်သင်၏ကြည့်ရှုသူများကိုစာရင်းပေးသွင်းရန်တောင်းဆိုနိုင်သောဗီဒီယို၏အဆုံး၌ပါ ၀ င်သောပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းမင်းရဲ့ website ကိုလူသိများအောင်ဒါမှမဟုတ်မင်းပရိသတ်ကိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုဆီညွှန်ပြဖို့အဲဒါကိုသုံးနိုင်တယ်။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ပြန်သွားပြီးသင်၏ချန်နယ်တွင်တင်ပြီးသောဗီဒီယိုဟောင်းများသို့အဆုံးသတ်မျက်နှာပြင်များထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ YouTube စာရင်းပေးသွင်းသူများနှင့်အခမဲ့ YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆုံးသတ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုထည့်ရန် Creator Studio ၏ဘယ်ဘက် menu သို့သွားပြီး Content ကိုနှိပ်ပါ။ အဆုံးသတ်မျက်နှာပြင်သို့သင်ထည့်လိုသောဗီဒီယိုကိုရွေးပါ။ ဖန်သားပြင်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ပေါ်လာသောအဆုံးအကွက်ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏ပန်းတိုင်များပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောစာရင်းသွင်းမှုအပိုင်းလေးခုမှရွေးချယ်နိုင်သည်။
အခမဲ့ YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုရရှိရန်သင့်ဘက်မှတစိုက်မတ်မတ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်သည်။ ဒီနေ့တွေ့တဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်ကြည့်ရှုသူအသစ်တွေကိုအနိုင်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ထက်မြက်တဲ့နည်းလမ်းကမင်းရဲ့လက်ရှိကြည့်ရှုသူတွေကိုတန်းတူအာရုံစိုက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပါ။ သူတို့ကိုသင်ဖန်တီးသူဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးတဲ့အတွက်သူတို့ကိုတန်ဖိုးထားသလိုခံစားခွင့်ပြုပါ။ သင်၏ပို့စ်များတွင်သူတို့နှင့်ထိတွေ့ပါ။ သူတို့ရဲ့မှတ်ချက်များကိုဖြေကြားပါ။ မင်းရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းသူတို့ကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
မင်းရဲ့ပရိသတ်နဲ့ဒီလောက်အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖန်တီးတဲ့အခါအဲဒါကရေရှည်တည်ကြည်မှုကိုဆိုလိုတယ်။ သူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုသင်နားထောင်ပြီးသူတို့အပေါ်မှာလုပ်ဆောင်တဲ့အခါသူတို့ကကြားရတာကိုပိုခံစားရပြီးမင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပိုရင်းနှီးလာစေတယ်။ ပျော်ရွှင်သောကြည့်ရှုသူများသည်ပါးစပ်ဖြင့်လူသိရှင်ကြားကြေငြာခြင်းဖြင့်သင်၏အကြောင်းအရာများကိုသူတို့၏သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းများသို့ဝေမျှနိုင်သည်။
၁၀။ ကြည့်ရှုသူများကိုဝူးကြည့်ရန် Channel Trailers များကိုစဉ်းစားပါ
မင်းရဲ့ကြည့်ရှုသူအသစ်ကိုမင်းရဲ့ YouTube ချန်နယ်ကဘာလဲဆိုတာကိုရိုးရှင်းမြန်ဆန်တဲ့နည်းနဲ့အသိပေးချင်တာလား။ - Channel Trailers ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဤအရာသည်သင်လုပ်သောအရာနှင့်ကြည့်ရှုသူများအတွက်သင်ဖန်တီးသောအကြောင်းအရာထဲသို့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပေးသောရုပ်ရှင်နမူနာများနှင့်တူသည်။ သင့်ချန်နယ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်ချန်နယ်နမူနာများကိုသုံးနိုင်သည်။ အရှည်အား ၂၅ မှ ၃၀ စက္ကန့်ကြားထားပါ။
နောက်တွဲယာဉ်သည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်၏ဇာတ်လမ်း၊ သင်၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ချန်နယ်မှတဆင့်အောင်မြင်ရန်သင်ကြံစည်သောအရာကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ရယ်စရာဖြစ်စေ၊ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်စေရန်လိုသလား။ ဘာမဆိုမင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ပြီးမင်းရဲ့အလုပ်လမ်းကြောင်းနဲ့သဘောတူပါတယ်။ ကြည့်ရှုသူများကိုလွယ်ကူစွာစာရင်းပေးသွင်းသူများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရန်၎င်းကိုသက်ရောက်မှုရှိပါစေ။
ပုံသေးတစ်ခုသည်သင်၏ဗီဒီယိုအတွက်အဖုံးတစ်ခုအဖြစ်လုပ်ဆောင်သောအစမ်းပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့စာမျက်နှာပေါ်ကိုကြည့်တဲ့အခါကြည့်ရှုသူကပထမဆုံးကြည့်မှာပါ။ ငါတို့အားလုံးသိတယ်၊ ပထမဆုံးအထင်အမြင်တွေကနောက်ဆုံးခံစားမှုပဲ။ ထို့ကြောင့်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံသေးတစ်ခုဖန်တီးရန်သင်၏အားထုတ်မှုအားလုံး၌ကြိုးစားပါ။ များသောအားဖြင့်ကြည့်ရှုသူတစ် ဦး သည်သင်၏ဗီဒီယို (သို့) အခြားတစ်ခုကိုကစားရန်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်သည့်အချက်ဖြစ်လာသည်။
YouTube သည်၎င်းမှကျပန်းစခရင်တစ်ခုရိုက်ရုံဖြင့်ဗွီဒီယိုများအတွက်ပုံသေးပုံကိုဖန်တီးသည်။ ကိစ္စအတော်များများတွင်၎င်းသည်သင်၏ဗီဒီယိုသို့အသွားအလာနှင့်ကြည့်ရှုသူကိုကလစ်ရန်လှုံ့ဆော်ရန်မလုံလောက်ပါ။ သင်၏ပုံသေးကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။ YouTube ၏လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း 1280x 720px ဖြစ်ပါစေ။
Pro အကြံပြုချက် - ကင်မရာသို့တိုက်ရိုက်ကြည့်နေသောပြုံးသောမျက်နှာသည်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားတိုင်းအတွက်အချိန်တိုင်းနီးပါးအလုပ်လုပ်ပုံရသည်။
ငါတို့လူသားတွေဟာအလကားပစ္စည်းတွေကိုကြိုက်တယ်။ 'ငါ့အတွက်ဘာပါလဲ။ ' ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ်စုံတစ်ရာကိုမလုပ်စေခြင်းငှာဖြစ်စေ၊ မလုပ်ဘဲဖြစ်စေသောအကြောင်းအရင်းဖြစ်လာသည်။ အံ့သြစရာကောင်းသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏ YouTube ကြည့်ရှုမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သည်။ မင်းရဲ့အခမဲ့ YouTube ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုတိုးချင်လား၊ မင်းရဲ့ပို့စ်ကိုလူတွေပိုမှတ်ချက်ပေးချင်လား။ ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာပြိုင်ပွဲတစ်ခုကျင်းပရန်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးမင်းရဲ့ post မှာ comment ပေးရင်မင်းရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေကိုပြောပါ၊ သူတို့က free product တစ်ခုရလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်သင်၏စာအုပ်၏လက်မှတ်မိတ္တူ၊ သို့မဟုတ်သင်၏ဆော့ဝဲကိုအခမဲ့စမ်းသုံးကြည့်ပါ။ ညီညွှတ်မှုကိုရယူပါ။
သင်၏ YouTube ချန်နယ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ဆုလာဘ်များမိတ်ဆက်သောအခါမင်းရဲ့စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်ယာယီတိုးလာခြင်းနှင့်အလုံးစုံပါဝင်မှုကိုမြင်နိုင်သည်။ မင်းသူတို့ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတာနဲ့သူတို့ကိုတသမတ်တည်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဆွဲသွင်းပါ၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကမင်းဘဝအတွက်မင်းရဲ့ကြည့်ရှုသူတွေဖြစ်လာမှာပါ။
၁၃။ အခမဲ့ YouTube Likes ကိုမြှင့်တင်ရန်အခြားဖန်တီးသူများနှင့်ပူးပေါင်းပါ
သင်နှင့်တူသောလုပ်ငန်း၌ရှိသော YouTube ရှိအမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၌အလားတူပရိသတ်ရှိနိုင်သည်မှာလည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အကျိုးပြုခြင်းဖြင့်အချင်းချင်းကြည့်ရှုသူများကိုအားမပေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းရဲ့ချန်နယ်မှာမင်းနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့မင်းရဲ့နယ်ပယ်ကကျွမ်းကျင်သူကိုမင်းမေးနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့၏ပရိသတ်များကိုသင်၏ချန်နယ်သို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးသင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူအရေအတွက်တိုးပွားစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း၊ အကြောင်းအရာကိုသူတို့နှင့်ထပ်တူကျလျှင်ကျွမ်းကျင်သူကိုမသိသောသင်၏ကြည့်ရှုသူများသည်၎င်းတို့၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
သင်၏ချန်နယ်အတွက်မျက်ဆန်ပိုဖမ်းရန်သြဇာရှိသူများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းသည်စျေးကွက်စာအုပ်တွင်ရှေးအကျဆုံးလှည့်ကွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကဒီလိုပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာကိုမြင်တဲ့အခါအဲဒါကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပိုပြီးထောက်ခံချက်တွေ၊ စိတ်ကူးတွေကိုပိုပြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။ သူတို့ကမင်းရဲ့ပို့စ်တွေကိုမှတ်ချက်ပေးနိုင်ပြီးမင်းနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာကိုမြင်ချင်တဲ့ဘယ်အနုပညာရှင်ကိုမဆိုပြောပြနိုင်တယ်။
14. YouTube YouTube SEO ကိုကျွမ်းကျင်ပါ
Search Engine Optimization သည်လူတို့က၎င်းတို့အားရှာဖွေသည့်အခါအချို့သောသော့ချက်စာလုံးများကို သုံး၍ သေချာကြည့်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းမှာ YouTube မှာချက်ပြုတ်တဲ့ channel တစ်ခုရှိတယ်။ သင်ကင်ထားသောအသားညှပ်ပေါင်မုန့်ပေါ်တွင်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးပါ။ မင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်၊ ဖော်ပြချက်နဲ့သက်ဆိုင်ရာ hashtags တွေကိုပိုကောင်းအောင်မလုပ်ရင်ဒီဗီဒီယိုကိုလူတွေဘယ်လိုရှာမလဲ။ Google Planner ကဲ့သို့သော SEO tool များသည်လူအချို့အားသတင်းအချက်အလက်များရှာဖွေရန်သုံးသောထိပ်ဆုံးသော့ချက်စာလုံးများကိုသိစေသည်။
YouTube SEO သည်မည်သူမျှမရှာသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ်တွင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမပြုလုပ်ရန်သေချာသည်။ သို့မဟုတ်မည်သူမျှမရှာနိုင်သောခေါင်းစဉ်များ သင်အွန်လိုင်းမသုံးသောမှန်ကန်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုမည်သို့ရှာရမည်ကိုမသေချာလျှင်သင်၏ပြိုင်ဘက်၏ချန်နယ်ကိုလေ့လာပြီးမည်သည့်သော့ချက်စာလုံးများကအလုပ်လုပ်ပုံကိုသတိပြုပါ။ သော့ချက်စာလုံးများကမင်းကိုအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေပေးတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ YouTube Analytics ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
၁၅။ YouTube တိုက်ရိုက်ကြည့်ပါ
တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုများသည်ဒီမှာနေဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Instagram နှင့် Facebook ကဲ့သို့အက်ပလီကေးရှင်းပေါင်းများစွာသည်အမှတ်တံဆိပ်များ ၀ င်ရောက်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအမေးအဖြေကဏ္sessionsများနှင့် webinars မှတိုက်ရိုက်သင်ခန်းစာများနှင့်ထုတ်ကုန်သရုပ်ပြမှုများမှအခမဲ့ YouTube subscribers များရရှိရန် YouTube live တွင်သင်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သောမရေမတွက်နိုင်သောအရာများရှိပါသည်။
တိုက်ရိုက် session တစ်ခုတွင်သင်တည်ဆောက်နိုင်သောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအဆင့်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်သည်ပြိုင်ဘက်ကင်းသည်။ ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယို၏အကြမ်းဖျင်းနှင့်သဘာဝခံစားချက် (သို့) ဖြစ်ပျက်မည့်မရေရာမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိမရှိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုသည်ကြိုးစားရကျိုးနပ်သည်။ သင်တိုက်ရိုက်မသွားခင်သင့်ဗွီဒီယိုကပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ရန်သင့်လျော်သောဂီယာနှင့်အလင်းရောင်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သတိရပါ။
အထက်ပါအချက်များသည်သင်၏ချန်နယ်တွင်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုလူသိများစေရန်နှင့်အခမဲ့ YouTube subscribers များကိုရရှိရန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အရွယ်အစားတစ်ခုတည်းနဲ့သင့်တော်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာသတိရပါ။ ၎င်းသည်သင်နှင့်သင့်အတွက်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့်အရာမဟုတ်သည်ကိုသင်တဖြည်းဖြည်းသင်ယူနိုင်သောသင်ယူလေ့လာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာအကြောင်းအရာများဖန်တီးရန်နှင့်သစ္စာရှိစာရင်းသွင်းသူအခြေခံကိုတည်ဆောက်ရန်အမြဲတစေတင်ပါ။ အဆက်မပြတ်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် playlist တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်တူညီသောကြိုးတန်းဗွီဒီယိုများ။ မင်းရဲ့ဗွီဒီယိုခေါင်းစဉ်၊ ဖော်ပြချက်ကိုပိုကောင်းအောင်အာရုံစိုက်ပြီးမင်းရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုလူပိုဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့ hashtag တွေကိုသုံးပါ။
YouTube စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမင်းအတွက်အရမ်းလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုရင်မင်းကျွမ်းကျင်တဲ့အကူအညီလိုရင်ငါတို့ YTpals မှာမင်းရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံး SEO ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသက်သေပြနည်းစနစ်များကို သုံး၍ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့် YouTube အခမဲ့ကြိုက်နှစ်သက်မှုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိရိယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများရှိသည်။
သင်၏ YouTube စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်အဖွဲ့သည်သင်၏လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအကြောင်းလေ့လာပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
YouTube အကြောင်းအရာ ဖန်တီးသူများသည် ကြည့်ရှုသူများ၏ အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်ရန် အခြား ဖန်တီးရှင် အများအပြားနှင့် ပြိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အခမဲ့ YouTube မျှဝေမှုများနှင့် အခမဲ့ YouTube မှတ်ချက်များကို ရယူရန် ခက်ခဲသည်....
25th မေလ 2022
YouTube အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများသည် ၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းနှင့် ၎င်းတို့၏ YouTube အဆင့်များကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ SEO မဟာဗျူဟာတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ ဗီဒီယိုများကို အဆင့်သတ်မှတ်နေစဉ်တွင်၊ YouTube algorithm သည် ကြည့်ရှုသူအား လက်ခံယူသည်...
16th မေလ 2022
ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများ၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းအားကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် YouTube တွင် ကြီးမားသောအမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလားအလာကို ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ Google မှ ဒုတိယအကြီးဆုံး ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ်...
ကျွန်ုပ်၏ရုပ်သံလိုင်းအတွက် YouTube Views, Likes နှင့် Subscribers တွေကို ၀ ယ်ပြီးသူတို့ဟာအရာအားလုံးအပြင်အပိုဆုကြေးတွေကိုအခမဲ့ပေးပါတယ်။ ငါ YTPals ထပ်ခါထပ်ခါအသုံးပြုလိမ့်မည်!
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် YTPals ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
YTPals အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကြယ် ၁၀ လုံးပေးချင်ပါတယ်။ သင်တို့အားလုံးကိုငါချစ်မြတ်နိုးတယ်။
YTPals၊ မင်းရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့ free activation ကိုစတင်ခဲ့တုန်းကကျွန်တော့်လိုင်းကိုသုံးဆကြီးထွားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း Subs 100 အောက်မှာ 300 မှ XNUMX ကျော်သွားလေ၏!
သူတို့ရဲ့ယူကျု့ချန်နယ်ကြီးထွားကူညီရန်အခမဲ့ YouTube ကို subscriber များအားရရှိမှုသူ 500,000 ကျော်အောင်မြင်သောယူကျု့ချန်နယ်ပိုင်ရှင်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။